FAALLO: Maxaa ka soo bixi kara Kulamadda Xildhibaanadda Barlamaanka ee Moshinnadda horyaala ? – Radio Dalsan FM 91.5 MHz | Warar Sugan | Somalia News
FAALLO: Maxaa ka soo bixi kara Kulamadda Xildhibaanadda Barlamaanka ee Moshinnadda horyaala ?
Fadhigii Lixaad ee Xildhibaanadda Barlamaanka Federalka Somalia ayaa la sheegay inuusan xirmi doonin xilligii loo qorsheysan oo ku beegan bishan August 27-da, kadib, markii uu Guddoonka Barlamaanka shaaciyey inay weli qabyo yihiin Mooshinadda loogu talagalay in laga dodo, si loo ansixiyo.
Kulamadda Xilligan ee Barlamaanka oo soo bilowday bishii April 27-dii ee sannadkan ayaa u muquda inuusan si joogto ah u qabsoomi jirin, sababo la xiriira Xildhibaanadda oo habsan ka noqda Xilliyadda Shirarka, iyadoo uusan Guddoonka Barlamaanka hanan kari la’ yahay inuu Tallaabo Anshsax-marin ah ka qaado Xildhibaanadda caadaystay inay sagsaag ka noqdaan Fadhiyadda Barlamaanka.
La-yaabna uma arkaan in Kulamadda ay u baaqdaan tiro-yaridda Xildhibaanadda, waxaana Xildhibaanadda lagu tilmaamaa kuwo si ku-talagal ah isaga jooga Hoteeladooda, marka ay Guddoonka Barlamaanka soo bandhigaan Mooshin aan Xasaasiyad lahayn.
Waa u dhaqan Xildhibaanadda inay Madasha Barlamaanka ku soo xoomaan, marka laga doodayo Mooshinadda Siyaasadeed, gaar ahaan kuwo u qorsheysan in Mas’ululiyiin xilalka looga xayuubiyo.
Xeeldheerayaasha ayaa u arka in Xilli-kordhinta Fadhiga Lixaad ee Barlamaanka inay ku salaysan tahay iyadoo ay miiska saaran yihiin Sharciga Isgaarsiinta iyo Moshinka ay qaar ka mid ah Xildhibaanadda ka soo gudbiyeen Madaxweynaha Dowladda Federalka, Xasan Sheekh Maxamuud.
Xildhibaanadda BFS ayaa jeclaa inay Fasax galaan, si ay ugu suurto-gasho inay booqdaan Qoysaskooda ku nool dalalka dibedda ama ay u soo danaystaan, laakiinse, waxaa hakiyey, kadib, markii ay Guddoonka Barlamaanka iclaamiyeen in xilli lagu daray Kulamadda Xildhibaanadda.
Mooshinka ugu garnaqsiga adkaan doono ayaana la saadaalinayaa inuu ka imaan doono Xildhibaanadad Mooshin-jecelka ee had iyo jeer u ololeeya Qandaraaska Mooshinka, kuwaasi oo la xusuusan yahay inay Saf-mar ka noqdaan hadba Mas’uulka ay u arkaan inuusan bixin karin Dufan-Siyaasadeedka ku sidkan Mudane, l Af-garo.
Xeeldheerayaasha ayaa rumeysan inaysan Xildhibaanadda wada taageeri doonin Mooshinkaasi, maadaama ay u arkaan Mooshin la keenay Xilli aan Munaasib ahayn, isla markaana uu Mooshinku abuuray Qas Siyaasadeed iyo Khatar Qaran.
Xildhibaanadda Mooshinka soo bandhigay, oo tiro ahaan lagu sheegay 91-Xildhibaan ayaa waxaysan lahayn Aqlabiyadda Codadka taageersan Mooshinka, oo dhan 184 Xildhibaan.
Xaalladda Siyaasadda ee haatan taagan ayaa laga cabsi qabaa inay ka abuurmaan Mowjaddo kale, oo ay ka mid tahay in Khilaafka Madaxweynaha iyo Xildhibaanadda Mooshinka wata uu u gudbo Maxkamadda Sare, iyo inuu Madaxweynuhu dalbado inay Xildhibaanadda keenaan Caddaymo muujinaya Qoddobadda ay ku eedeeyeen.
Taasi haddii la isla gaaro, waxaa hubaal ah inay Xildhibaanadda madaxa la geli doonaa Xukun Sharciyeed, maadaama ay muuqato inay Qoddobadda ay cuskadeen yihiin kuwo la mala awaalay, si loogu awr kacsado Dareenka Xildhibaanadda iyo Mujtamaca.
Sharci-yaqaanadda waxay kaloo rumeysan yihiin inuu Madaxweynuhu isagoo adeegsanayo Awoodda uu siiyey Dastuurka inuu kala diri karo Xildhibaanadda, si loo soo doorto Barlamaan cusub.
Laakiin, go’aan-qaadashada noocaasi ayaa u muuqata inuusan Madaxweynaha ku degdegi doonin, si aysan Xaalladda u sii gaagixin, loona badbaadiyo Hay’adaha Qaranka.
Markaynu isku soo duubno, Xildhibaanadda BFS ayaa laga filayaa inay Mooshinka ku xaliyaan qaab kasta oo aan kala dhantaali doonin Midnimadda Golayaasha Dowladda iyo Fulinta Hawlaha Qaranka.
Somalia: Al- Shabab threatens to continue explosion attacks
AMISOM oo tababar u furtay boqolaal ka tirsan Ciiddanka Maamul-gobaleedka K/Galbeed Somalia